Indalo-Iindlela zokuHamba | Uhambo lwe-Absolut (Iphepha 2)
Imeko-bume e-Australia inezinto ezininzi eziphilayo, kwaye ngaphezu kwako konke, inomdla njengeplatypus okanye i-dugong.
Ngaba uceba uhambo oluya eColombia? Sikuxelela yonke into malunga nemozulu yaseColombia ukuze ukonwabele iholide yakho naphi na apho uya khona.
Ngaba uyafuna ukwazi i-5 yeLwandle oluMkhulu eMelika kwaye uphile iholide? Kule posi sifumanisa okhethekileyo ngala machibi.
I-Gulf yaseVenezuela ngumzimba wamanzi osemantla oMzantsi Melika, ohlala kwindawo enkulu kakhulu eVenezuela.
I-condor ye-Andes, intaka yesizwe
I-Condor ye-Andes yenye yezona zilwanyana zibonakalisayo eMzantsi Melika, intaka yesizwe yaseBolivia, eChile, e-Ecuador, ePeru naseColombia.
Umlambo waseMagdalena ngembali yaseColombia
Umlambo waseMagdalena ngowona mthambo ubaluleke kakhulu eColombia kubude bawo kunye nokuhamba kwawo kunye nobunzima bayo bembali.
Iipaki kunye nolondolozo lwendalo lweAmazon yaseColombia lenza eli lizwe libe yenye yezona ndawo zinobungozi kwindalo iphela.
Sable sable, ubutyebi bezilwanyana baseRussia
I-sable, ubuncwane bezilwanyana baseRussia, yi-mustelid evela kusapho lweebadger kunye ne-otters ezimile ngeenwele zayo ezixabisekileyo.
Iintyatyambo eVenezuela zityebile kakhulu kwaye zahlukahlukene. Kodwa siza kugxininisa phakathi kwabo i-orchid kunye ne-araguaney, umthi welizwe.
Owona mlambo mde emhlabeni yiNayile.Kodwa ukuba sijonga ezinye iindlela ezifana nokuhamba kwamanzi, isihloko sidlulela kwiAmazon.
Intlango yaseTabernas yindawo yendalo enomtsalane eye yasebenza njengeseti yeefilimu zasentshona kwaye likhaya kwiilali ezintle.
Intlango yeSahara yeyona inkulu ehlabathini. Kuyo unokufumana izikhumbuzo zemvelo kunye nezixeko ezinomtsalane okhethekileyo.
Ukuloba eCanada yenye yezona zinto zidumileyo kunye nezona zilungileyo zokuzonwabisa kubathandi bendalo.
Umda weTriple ophawula imida phakathi kweArgentina, iBrazil kunye neParaguay yenye yezona ndawo zidumileyo eTrifinians emhlabeni.
Izilwanyana zase-Australia zenzelwe uninzi lwezinto eziphilayo ezingenakufunyanwa naphina emhlabeni. Kodwa kukho inkcazo yesayensi ngobukho bezinto ezininzi ezimangalisayo kumazwe ase-Australia.
IBeverver, isilwanyana sesizwe saseCanada
Ngokwe-National Symbol of Canada Act, umthetho owamiselwa ngo-1975, yamkelwe yaze yabhengezwa into yokuba ibeaver ...
I-Timanfaya National Park yahlukile eSpain ngenxa yokufana kwayo nentaba-mlilo. Xa undwendwela, uya kuziva uhanjiswa kwindawo yenyanga.
Imbali yengcuka yaseJapan, iintlobo ezingasekhoyo?
Sele kudlule iminyaka elikhulu zikho iingcuka zokugqibela ukuhlala ezintabeni zaseJapan. Ezi zilwanyana kufuneka ...
I-La Hermida gorge yeyona inde eSpain. Inika imibono enomdla yePikos de Europa, izikhumbuzo kunye ne-gastronomy entle.
Indlela kaGiant, kunxweme loMantla eIreland, yinyani yokwenyani yejoloji enentsomi entle eya kukuchukumisa.
Ngaba uyafuna ukufumana ngakumbi malunga neBear Path? Ungaphuthelwa lonke ulwazi esikunika lona namhlanje malunga nokusingqongileyo e-Asturias.
Kwidama laseYesa awuyi kufumana imithombo eshushu kuphela kunye nendawo yokuphumla, kodwa ilungele ukuhamba intaba kunye neendlela zemidlalo. Fumanisa!
ILacuniacha yipaki yendalo esinika indlela efanelekileyo yokufumana iintlobo ngeentlobo zezilwanyana kunye neentyatyambo kuwo onke amanyathelo, kunye neembono
ILaolina yenye yeendawo zokutyela ezotyibilika ngokugqibeleleyo kubo bonke abaphulaphuli. Fumanisa yonke into ekufuneka isinike yona.
IPaki yeSizwe yeKomodo
Isendle kwaye ingalawulwa, iPomodo National Park yaseIndonesia yiparadesi edume ngobukho becikilishe.
ILake Bled: Iindwendwe zaseSlovenia
Ukuba undwendwela iLake Bled eSlovenia uya kufumana umhlaba omlingo kunye nowendalo ofanelwe yintsomi yaseYurophu.
Ukuba ujonge ukulahleka kwenye yezimanga ezinkulu zendalo zehlabathi, iVictoria Falls iba yeyona nto ifunyanisiweyo.
IMallos de Riglos yenye yezona ndawo zibakhenkethi kakhulu eHuesca. Badibanisa i-adventure kunye nokunyuka okanye ukuhamba imidlalo.
Yintoni ongayibona eValle del Jerte
IJerte Valley inoomasipala bayo, amachibi endalo kunye neendawo zokujonga, phakathi kwezinye izinto ezintle ongaphoswa zizo. Bafumanise!
I-Mekong Delta: ezantsi kweenjiko zaseVietnam
Imithi yekhokhonathi, amasimi erayisi abanzi okanye iilali ezidadayo zilinde kwiMekong Delta evusa umlingo kunye nokungaqheleki kweVietnam. Ngaba uyafuna ukuyazi?
Iindlela zokunyuka intaba eMadrid
Ngenxa yokuba indalo isivumela ukuba sonwabele iimfihlelo ezininzi kwaye ngoku, sinokuzifumana enkosi kwezi ndlela zokunyuka intaba ngeMadrid
Ukuhamba ngeeridons zaseRuidera kuyasivumela ukuba sazi imeko yendalo. Iindlela, indawo yokujonga kunye nokunye okuninzi ukonwabela ukuphumla okufaneleyo.
Umthombo womlambo i-Cuervo
Siya eCuenca ukuya kufumana ilitye lesikhumbuzo eliguqula njengomthombo woMlambo iCuervo. Indawo eyodwa ngeendlela ezahlukeneyo.
Ukuhamba kwexesha kuyenzile le ndawo yenye yezona zifunwayo. ILa Pedriza ibekwe eManzanares el Real, eMadrid. Ukusuka apha unokufumana indawo ejikelezwe yindalo apho unokuziqhelanisa nokunyuka, ukuhamba intaba okanye ukonwabela ukubonwa kwayo.
Indlela egqibeleleyo embindini wendalo yileya esiya kuyifumana kwiGarganta de los infernos. Fumanisa le ndawo inomtsalane eCáceres, apho indalo kunye namachibi amanzi amatsha aya kuba ngabona baphambili.
Amachibi eSomiedo yindawo entle omele uyindwendwele. Zibekwe e-Asturias kwaye zishiya ubuhle obungafaniyo kwaye, ewe, ziyindalo. Apho ungonwabela indalo ngohlobo olusulungekileyo, uthatha inxaxheba kwiindlela ezahlukeneyo okanye kwimisebenzi eyahlukeneyo. Uya kuba neholide engalibalekiyo!
ICastañar del Tiemblo
Indalo ihlala isishiya neendawo ezizodwa kunye neendawo. Kule meko siya kwiCastañar del Tiemblo. Indawo ekhethekileyo, ngakumbi ekwindla kwaye sinokuyifumana kwiphondo lase-Avila. Indawo ephambili onokuyonwabela nosapho!
Sikunikezela ngendawo enomtsalane kwaye unokuyifumana eJaén. Umfula weentaba ofihla iimfihlelo ezininzi. Ukhenketho lwaseSierra Mágina oluxabisekileyo ngenxa yeembono zalo ezintle. Kodwa ayisiyiyo yonke loo nto, kuba ungonwabela noomasipala bayo abathandekayo abakufutshane.
INacedero del Urederra yindawo yendalo eyenziwe ngokudityaniswa kwamachibi kunye neengxangxasi, apho umbala wamanzi uyenza icace into yokuba ubuhle bukhona kuwo onke amanyathelo. Fumanisa yonke into oyifunayo ukwazi ukuthatha ithuba lotyelelo kule ndawo.
Sihambile saya eMexico ngakumbi eNanacamilpa, eTlaxcala. Apho siyokonwabela ingcwele enkulu yeempukane kunye nembonakalo yazo yendalo.
Ukhenketho lwento ebizwa ngokuba yiCopper Canyon efumaneka kwilizwe laseChihuahua eMexico. Indawo ekhethekileyo eneembono ezizodwa.
Indlela kaGiant ibekwe kumantla mpuma eIreland. Indawo yomlingo, yamabali kunye nangaphezulu kweembono ezinomtsalane.
ICaldera de Taburiente yindawo egcwele ubutyebi. Iintyatyambo, izilwanyana kunye neembono ezisivumela ukuba sonwabe zizodwa. Fumanisa yonke into oyifunayo!
Kufuneka ubone into ebizwa ngokuba yiRio Mundo. Ime kwi-Sierra de Albacete kwaye isinika umboniso ojikelezwe yindalo.
Isixeko esimnandi saseCuenca
Yonwabela yonke ikona yeSixeko esiCociweyo seCuenca ngesi sikhokelo sibalulekileyo. Uya kuba nayo yonke into oyifunayo ezandleni zakho.
Fumanisa iHlathi leIrati, indawo yokulahlekwa ineendlela, iimbono kunye nobuhle obukhethekileyo. Sukuphoswa yiyo!
Sithetha ngobume beMorocco, kunye nemilambo ephambili kunye neentaba zalo mmandla ukhethekileyo eMntla Afrika.
Imimangaliso esixhenxe yendalo yaseIreland
I-Ireland igcwele imimangaliso yendalo. Kwaye inezinye iindawo, ezinje ngomgxobhozo wase-Allen okanye u-El Burren owenza i-Ireland indawo ekhethekileyo
Iintyatyambo kunye nezilwanyana zomNayile
Ulwazi malunga nezilwanyana kunye neentyatyambo ezihlala kuMlambo umNayile, yenye yezona zinkulu emhlabeni kwaye enobutyebi obukhethekileyo bebhayiloji
Iintlango ezintathu zasePeru
IPeru yaziwa ngezinto ezininzi, kubandakanya neentlango zayo. Kule posi siyazazi ezinye zeempawu zentlango ezintathu ezaziwa kakhulu.
Izilwanyana kunye neentyatyambo zeGran Sabana yaseVenezuela
Sikubonisa zonke izilwanyana kunye neentyatyambo ezihlala eGreat Venezuela yaseSavannah, ebekwe eGuyanas massif kwaye iyakumangalisa ngeentlobo zayo.
Iipaki kunye noovimba bendalo kwingingqi yeeNtaba zeAndes
IHuascarán National Park yadalwa ngonyaka we-1975 kwingingqi yeAncash, kwaye yanabela ngaphezulu ...
Uninzi lwabahambi bathanda ukutyelela ezo ndawo zisinika ubutyebi obuninzi kwiindawo zabo zendalo ...
Izibane zasemantla zabonakala ngaphezulu kweIreland
Kuyamangalisa njengoko kubonakala ngathi, iiLights zaseNyakatho zavela ngaphezulu kweIreland
Inamba eyingozi eluhlaza okwesibhakabhaka ivela eQueensland
Inamba eluhlaza okwesibhakabhaka enobungane neyingozi iyavela e-Australia
Ihlathi laseAmazon lasePeru
Kwihlathi elinyulu, elibizwa ngokuba lihlathi lemvula laseAmazon, elihlala kwiipesenti ezingama-57 zempuma yommandla wasePeru, kukho ...
I-Peru, irekhodi lehlabathi lokwahlukahlukana kwendalo kunye nendalo
IPeru lelinye lamazwe ama-5 anelona nani likhulu leentlobo ezahlukeneyo zezilwanyana kunye ...
Imozulu yaseKhanada ibonakaliswa bubusika obubandayo kunye nehlobo elipholileyo okanye elipholileyo, lifumile imini yonke.
Umhlaba wooFaro ujikelezwe ziintlango ezintle. Sikuxelela ukuba zeziphi iintlango zase-Egypt ukuze ungaphoswa nanye.
Amachibi ama-5 amahle kakhulu eMelika
Okulandelayo sifuna ukuthetha malunga namachibi amahle kakhulu e-United States, alungele abahambi abonwabela imisebenzi yangaphandle
Iimpawu zebhere yepanda, uphawu lwe China
I-Kanrensetsu kunye neentyatyambo ze-lotus
Iintyatyambo zeLotus zixabiseke kakhulu eJapan. Apha sixelela iinkcukacha ezinomdla malunga nesityalo kunye nobudlelwane baseJapan kunye naso.
Iindlela zokufa e-Australia
Iindlela ezisixhenxe zokufa e-Australia ezandleni zezilwanyana ezahlukeneyo
Isithili seLake eNgilani
Ikwabizwa ngokuba yi "Amachibi" okanye "Umhlaba waMachibi", iSithili seLake eNgilane yiPaki kaZwelonke ethi ngokwandiswa kwendawo engama-2.292 km2
Indlela yenkcubeko eCórdoba: ukukhangela imizobo yomqolomba
Phakathi kweendlela zenkcubeko yaseCórdoba unokulandela umkhondo wabemi bomthonyama ngemizobo efumaneka emiqolombeni.
Intyatyambo ebomvu, intyatyambo yelizwe laseDenmark
I-clover ebomvu okanye i-violet clover yintyatyambo yelizwe laseDenmark. Igama lenzululwazi nguTrifolium pratense. Yi…
IBahia kunye neelwandle zayo zeparadesi
Bathi lelona lizwe likhazimlayo eBrazil, kodwa eneneni iBahia iseyi-strip ...
Iintyatyambo zeentaba zommandla weentaba wonxweme lwaseVenezuela zibonakaliswa ngamahlathi e-savanna, xerophilous, ...
Amapá, phakathi kwamahlathi kunye nokuzonwabisa
I-Amapá lelinye lamazwe aseBrazil, akummandla ongasentla ongaphaya komda, umda weFrance Guyana kunye ...
Iindawo ezigqibeleleyo zeenkampu eFlorida: Fort De Soto Park
Ukumisa amatye okungqonge ubuhle bendalo ngumsebenzi ofanelekileyo kusapho lonke. Ukuba imeko yaseFlorida, ...
Ukuhamba ngeenyawo kwi-Serra da Arrábida Natural Park
I-Serra da Arrábida Natural Park, ekumazantsi eLisbon, likhaya ...
Isikhumbuzo soXolo lweCaracas
Isikhumbuzo seSikhumbuzo esakhiwe nguDkt. Farid Mattar ngo-1963, sisikhumbuzo semvelo kunye ...
IPortugal iselinye lawona mazwe aseYurophu atshiphu ukutyelela, ngakumbi kwixesha elisezantsi, apho…
Izinto zaseKhanada ziqaqambisa kwihlabathi liphela
Ngubani ongenakulindela izinto ezinkulu kwilizwe lesibini ngobukhulu emhlabeni? Olu luhlanga lwenkqubela, ubuhle ...
ICanada ingaphezulu kwesiqingatha samachibi ehlabathi
Ngaba uyazi ukuba ngaphezulu kwesiqingatha samachibi ehlabathi aseCanada? Kuqikelelwa ukuba kuyo yonke into ...
Fumanisa i-Emerald Coast eBrazil
Xa uninzi lwabantu lucinga ngokuya eBrazil, izibane eziqaqambileyo zedolophu ephumelelayo ye ...
ISweden, inkcubeko kunye nendalo
ISweden lelinye lamazwe aseScandinavia anikezela ngenkcubeko, kunye nomoya ovulekileyo wokuqonda ...
Inyaniso enomdla malunga neBrazil
Brazil; ilizwe elinendalo exotic, phantse i-8 lamawaka eekhilomitha, kunye namanxweme amahle, abantu abonwabileyo, amasiko amandulo ...
ICanada ineentaba-mlilo ezingama-21 ezisebenzayo okanye ezinokuqwalaselwa njengangoku zisasebenza. Phakathi kwezona ziphambili esinazo: Fort Selkirk ...
I-craze yamva nje yezilwanyana yase China: ukupeyinta inja
Ngoku ihlabathi lezilwanyana alikho njengoko lalinjalo ngaphambili. Ngoku iintlobo zasendle zikhuphisana eziyingozi: ...
Isiqithi saseNewfoundland, izilwanyana kunye ne-adventure engalibalekiyo
Isiqithi saseNewfoundland (Newfoundland) simi kunxweme olusempuma kwiphondo laseNewfoundland naseLabrador….
Iindlela zakudala ePeru
I-Peru inendawo emangazayo yokubonelela: ukusuka kwiintaba ezigqunywe likhephu, impucuko engaqhelekanga kunye nemangalisayo ...
I-Arches National Park e-Utah
Ngaphandle kwazo zonke iipaki zesizwe zase-Utah-iZiyon, iBryce Canyon, iiArches, iCanyonlands, iCapitol Reef, kunye ne ...
Ulwazi lwemozulu yeRussia
Ummandla omkhulu waseRashiya unemimandla emine yemozulu: i-tropical, i-temperate, i-sub-polar kunye ne-polar. Indawo yemozulu ...
Fumanisa iingqaqa zekorale zaseVenezuela
Iingqaqa zekorale ziindlela ezintle zobomi ezinokubonwa kuphela kulwandle olufudumeleyo ...
I-Tepuy, ithafa le-Gods
I-Tepuis inyusa intaba ethe tyaba efumaneka eGuiana yo Mzantsi Melika, ngakumbi eVenezuela. NONE
Iipaki zikazwelonke ezimangalisayo zaseNgilani
I-England ineepaki zesizwe ezisithoba ezigubungela malunga neepesenti ezisi-8 zelizwe kwaye ...
Isibini saseAdelaide Zoo panda
Imimandla emi-6 yeArgentina
IArgentina ihlala phantse isiqingatha sonke esisemazantsi eMzantsi Melika, ililizwe lesibhozo ngobukhulu emhlabeni, ...
Izinto zokwenza eAnchorage
I-Anchorage yidolophu yedolophu ebekwe kumazantsi wombindi weAlaska, kwaye yenye yezo ndawo ...
Fumanisa iPaki yeSizwe yaseTijuca
Uhambo oluya eRio de Janeiro lubangela imincili ngemihombiso yalo kunye nomxube wenkcubeko….
Iimbonakalo zomhlaba wasePeru: Unxweme kunye neJungle
Umkhenkethi unokufumana imimangaliso yendalo kunye neyakudala yasePeru kunxweme lwePasifiki okanye ...
Iilwandle ezintathu zokuzonwabisa eBahia
Ngonxweme olunzulu lolwandle, iBrazil iyazingca ngokuba neelwandle ezintle kakhulu kule ndawo yelizwekazi ...
Imbali yePeninsula yeParaguaná
Ipeninsula yaseParaguaná, ekumantla elizwe laseFalcón, yafunyanwa ngo-Agasti 9, 1499 ngumatiloshe uAlonso ...
Iilwandle ezidumileyo zaseBrazil
Ngaphandle konxweme olubanzi, iBrazil ineelwandle ezimbalwa ze-nudism. Amantombazana angenasiphelo ...
Yazi iGrizzly Bear Shelter eBanff
I-Banff National Park, ebekwe kwiiRocky Mountains i-180 km kwintshona yeCalgary, kwiphondo lase ...
Isikhokelo kumanxweme aseBrazil
Iilwandle ze-nudist zaseBrazil azikho ninzi, kodwa ngokuqinisekileyo zintle. Ubunqunu buqhutywa ngokungekho semthethweni ...
Iilwandle zeParadisiac zaseBrazil
Abantu baseBrazil bayithathela ingqalelo imimandla yabo eselunxwemeni, kwaye inkcubeko yaselwandle yinxalenye ebalulekileyo yesimbo se…
Inyaniso enomdla malunga neCuba
ICuba lilizwe elikumantla eCaribbean enikezela ngeendlela ezahlukeneyo zokhenketho ezingama-365 ...
Igadi yaseJapan eIreland
I-Tully, igadi yaseJapan eIreland
Elona xesha lilungileyo lokuhamba ngenqanawa kumNayile
Umthombo wokuchuma nobomi, enye yeendlela ezingasoze zilibaleke kuhambo oluya eYiphutha lukuMlambo iNayile,
Iindawo ezinika umdla zotyelelo kuMazantsi eZantsi eRio de Janeiro
Ummandla woMzantsi weRio de Janeiro yindawo apho abaninzi abakhenkethi bahlala khona. Uninzi lwe ...
Izilwanyana kunye neentyatyambo zaseKorea
Eli lizwe likwindawo enemozulu efumileyo yelizwekazi, evumela ukukhula kohlaza, ...
IGullmar Fjord imi kwicala elisemantla eGothenburg Kungatshiwo ukuba ngumsila apha…
Iingcebiso malunga nohambo ngenqanawa kumNayile
Ukuba uthatha isigqibo sokuhamba ngenqanawa yomNayile, qiniseka ukuba inqanawa inikezela 'konke ...
IVenezuela lelinye lawona mazwe mahle kweli lizwekazi. Kwaye indalo iyamangalisa kwaye ikhuselwe ngama-40 ...
Izilwanyana ezintle zasePeru
IPeru ityebile ngokwahlukahlukana kuzo zonke izikali: abantu bayo, imozulu yayo kunye nemimandla, ngakumbi ...
Iimbono ezilungileyo zeNiagara Falls
Awunakuyixabisa indawo efana neNiagara Falls kwiifoto okanye kwiimuvi zodwa. Ukuze ndi…
Imimandla yendalo enomdla yaseArgentina
IArgentina lilizwe lendalo xa lithelekiswa nemimandla eyahlukeneyo apho ukwahluka kwendalo kunye neendawo ezinomtsalane zande.
Izilwanyana ezisengozini kwiiAndes zasePeru
ICordillera de los Andes entle yindawo yokuhlala yezilwanyana ezininzi ezisemngciphekweni wokuphela ...
Iindawo zokhenketho lwasemaphandleni eBrazil
Uhambo oluya eBrazil lumele uluhlu lwamathuba okonwabela indalo kunye nemisebenzi emininzi yangaphandle.
IiAndes ezinomtsalane zasePeru
IiAndes zasePeruvia zibonelela ngeyona mbono mihle yeentaba ezigqunywe likhephu kunye nomkhenkce ...
EMoscow, isixeko esiluhlaza
EMoscow ikomkhulu le-Russian Federation. Lishishini, inzululwazi, inkcubeko kunye neziko labakhenkethi beli elitsala ...
UMadre de Dios, ikomkhulu lezinto eziphilayo zehlabathi
Indawo esehlathini ekude yaseMadre de Dios kwiAmazon yasePeru ibizwa ngokuba likomkhulu le ...
Izilwanyana ezintle zase China
I-China inezilwanyana ezahlukileyo kwindawo yonke.
Isiqithi saseBuenaventura, iparadesi yendalo
Isiqithi saseBuenaventura kunxweme lweGaspé kwiPhondo laseQuebec (iikhilomitha ezingama-772 ukusuka…
Izimangaliso ezisixhenxe zaseKhanada
Ngo-2011 inkampani kamabonakude i-CBC yaququzelela ukhuphiswano kumzamo wokufumana izinto ezisixhenxe ezidumileyo ...
Kakhulu, isixeko esingaze silale
Isixeko esiqhelekileyo sase-Egypt sokundwendwela yi-Tanta, ebekwe kwi-Lower Egypt, ikomkhulu ...
Uya phi eCanada ngoDisemba?
Kwabaninzi, uDisemba yeyona nyanga ifanelekileyo yokundwendwela iCanada, kuba ebusika (uDisemba-Januwari-…
Iindawo zokundwendwela kumazantsi eUnited States
Ukukhangela uluhlu lweendawo zokundwendwela kwingingqi esemazantsi eUnited States? Olu luluhlu lwezinto ezinomdla ...
Ukhenketho oluyimfihlakalo ePeru
Ukhenketho oluyimfihlakalo luba nengcinga engalunganga ngamanye amaxesha Umntu unokucinga ukuba iqela lamahipp lihlanganisene ...
Ezona ndawo zintle zokhenketho eVenezuela
Uninzi lwezokhenketho eVenezuela alwaziwa ngabantu abaninzi. Into abantu abangayaziyo kukuba kukho ...
I-Salinas Grandes: eyona ntlango inkulu yetyuwa eMelika
ILas Salinas Grandes yintlango enkulu enetyuwa ebandakanya amaphondo aseCórdoba naseSantiago del Estero. Yibane…
Ndwendwela imizobo yomqolomba weBarranco de la Gasulla eAres del Maestre
Imiboniso esiyifumanayo eBarranco de la Gasulla yenziwe isitayile kwaye iphantse yangumfuziselo wokuzingela, nangona kukho iindawo zokuqokelela, umzekelo. Ukukhankanywa okukodwa kufanelekile kwiBarranco de la Gasulla de Ares del Maestrat, iCueva Remigia, enamanani angaphezu kwama-500, kubandakanya abantu nezilwanyana, kwiseti engaphezulu kweshumi leendawo zokufihla intloko. Ukuzingelwa kwenkunzi yenkomo yasendle okanye ukuzingelwa kwehagu zasendle zizinto ezibini eziphambili kwiseti, ethathwa njengeSistine Chapel yexesha leNeolithic ngenxa yemeko entle yolondolozo.
Eyona milambo mide eRashiya
Imilambo kunye namachibi ngawona mthombo wamanzi kunye nonkcenkceshelo kwihlabathi. Malunga ne-3% ...
Fumana iPaki yeSizwe yaseTurquino
Ifumaneka kumazantsi mpuma eCuba, entliziyweni yeSierra Maestra, iTurquino National Park ine ...
Ingcongolo yasebusika, intaka encinci yaseIreland
Ingcongolo yasebusika, izilwanyana zaseIreland
Izilwanyana zasendle zaseUruguay
Phakathi kweentaka ezixhamlayo i-Uruguay ineentlobo ezizodwa ezibizwa ngokuba yi-carancho yintaka edlayo kwaye kwezinye iimeko ihlala izingela kwaye itya iimpuku ezincinci.
Izilwanyana zasekhaya zaseUruguay
Phakathi kwezona zilwanyana zidumileyo zithandwayo e-Uruguay sinokufumana iingonyama zolwandle ezihlala kwiziqithi ezifumaneka eRio de la Plata nakumasebe aseRocha, kwimimandla enamatye elwandle, kukwakho nezinye izilwanyana ezanyisayo ezinjenge capincho, mulita okanye armadillo.
Iintlanzi ezivela kumlambo iUruguay
Ezinye zeentlobo zeentlanzi eziqhelekileyo kuMlambo i-Uruguay zii-catfish, i-pati, i-tarariras, i-pejerrey, i-dorado, i-turkey, nangona kunjalo zikhona nezinye iintlobo zeentlanzi kodwa ezincinci ngobukhulu ezinjenge-mojarritas, las ngamanye amaxesha ezisetyenziswa kwi-gastronomy.
Izilwanyana zaseVenezuela: iJaguar
Uninzi lweentlobo zejaguar eVenezuela zihlala eSierra de Perija, nangona kunjalo ijaguar nayo ihlala kwingingqi yeLake Maracaibo, kodwa lo mmandla kulapho nawo usongelwa khona, oku kuye kwabhengezwa ngumbutho womanyano lwehlabathi kwindalo leyo, ijolise ekulondolozeni nasekunyamekeleni iintlobo zezilwanyana ezisemngciphekweni wokuphela, khumbula ukuba i-jaguar nayo ihlala eArgentina, eBolivia nasePeru, kwezona ngingqi zirhabaxa zala mazwe.
Iintlanzi zemveli zaseVenezuela
IVenezuela nayo ineentlobo ngeentlobo zezilwanyana ezingenamqolo kunye nezilwanyana zasemanzini, ngenxa yemozulu kunye neentyatyambo ezahlukeneyo ezikhoyo ezivumela ezi ntlobo zeentlanzi ukuba ziphile zize zivelise ezinye iindawo, kunye nemilambo yaseVenezuela. iintlanzi ezinje ngeentlanzi zepensile, iihemiode, iikoporos kunye nezinye iintlobo zepiranhas.
Ukurhweba ngohlobo oluthile eVenezuela
Sinokuyifumana kwimimandla esezantsi yetropiki i-tapir, okanye ii-alligators ezithengiswayo kunye nezinye iintlobo zofudo ezifana ne-hawksbill kunye ne-kardinal turtle.
Ijografi yeRiphabhlikhi yaseDominican
IRiphabhlikhi yaseDominican ibekwe kwiziqithi zeAntilles, kwimpuma yesiqithi "La Hispaniola". I…
Xa uthetha ngeemveliso eziqhelekileyo zeRiphabhlikhi yaseDominican, iRum enomoya, ibhiya egqwesileyo ...
Idatha yendawo yeUruguay
IRiphabhlikhi yaseMpuma ye-Uruguay ine-68.038 yeekhilomitha zomhlaba, ikwindawo yesibini njengelona lizwe lincinci ...
Ukuba ufuna ukutyelela iCroatia, kuya kufuneka uyazi ukuba yahlulahlulwe yangamaqela, kodwa abekwe ngokwamaqela emimandla, ...
Igadi yeBhotani yeNaguanagua eValencia
Imifuno kunye nendalo eVenezuela yenye yezona zityebileyo kwilizwekazi, ngenxa yesi sizathu eli lizwe lase Mzantsi Melika lineepaki zendalo ezahlukeneyo kunye nezilwanyana kunye neentyatyambo, kodwa enye yezona zibaluleke kakhulu yiNaguanagua Botanical Garden, apho sinokujonga khona ukongeza kwiintlobo zemveli zaseVenezuela, kunye nezinye iintlobo zemithi, izihlahla ezivela kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi, ezinje ngeTshayina, iUnited States okanye iYurophu, kukwakho negreenhouse apho imalunga nokulondolozwa kwezinye iintlobo zemithi etshabalalayo, ngaphandle kuthandabuza le ndawo yindawo entle yokwazi nokonwabela.
Ukuba ucinga ukuba iCuba inamabhishi kuphela, uphosakele kakhulu. Eyona inkulu yee-Antilles, nangona ililizwe ...
Ifumaneka phakathi kweMntla Melika nePortugal, embindini woLwandlekazi lweAtlantic, ziziqithi ezilithoba ...
Iindawo ezilungileyo kubakhenkethi eCanada
Ngenxa yobungakanani beCanada, uninzi lwabakhenkethi luza kuya kwizixeko ezikhulu okanye amahlathi atsala ...
IPaki yeSizwe iHakone
IPaki kaZwelonke iHakone yipaki ekufutshane neYamanashi kunye neShizuoka, kunye nezithili zaseKanagawa, kunye nentshona yedolophu yaseTokyo….
Imimandla yolawulo yaseVenezuela
IVenezuela ekuqaleni yayiliphondo elincinci laseSpain apho uninzi lwabomthonyama lwalusetyenziswa njengabasebenzi kwaye kuloo mmandla izinyithi ezixabisekileyo ezinjengegolide nesilivere zakhutshwa, nangona kunjalo kwiinkulungwane ezithile iVenezuela, ngenxa yomzabalazo wenkululeko yayo, yayiyinto eyayibizwa ngokuba IGolombia enkulu, intsimi yaseVenezuela yayihlangene neColombia kunye nenxalenye yeEcuador nePanama, eli lizwe lahlulahlula lakha amazwe azimeleyo, njengoko kunjalo nanamhlanje, eColombia, eVenezuela nasePanama.
Inyoka, iLa Serpentina (ekwabizwa ngokuba yi-Serpentina River) yi-28-acre (11 ha) echibini lokuzonwabisa ...
IKillary, ekuphela kwefjord eIreland
I-Ireland ayililo ilizwe leefjords. Akukho mntu ucinga ngeIreland xa uthetha ngeefjords ... kwaye ...
Uphuhliso oluzinzileyo kwiiCanary Islands
Iziqithi zeCanary zenze, kwiminyaka yakutshanje, uthotho lwezenzo zokukhuthaza ukukhula okuzinzileyo ...
Truro, indalo kunye nembali eCornwall
I-Truro sisixeko esikwingingqi yaseCornwall yase-United Kingdom. Iingxelo zichaza ukuba ekuqaleni uTruro wakhula ebaluleke ...
Iziqithi ze-Ontario: Isiqithi saseWolfe
Isiqithi saseWolfe sesona sikhulu kwezi ziqithi zibizwa ngokuba zii-Thousand Islands. Ifunyanwa kwiLake Ontario kwaye iphela ngoMlambo oyiNgcwele…
Unonophelo lwendalo lwaseCanada
ICanada yamkelwe ngokunyamekela indalo kunye nezilwanyana ezisengozini, njengoko eli lizwe ...
Yintoni ongayibona ePortalegre
IPortalegre likomkhulu leSithili sasePortalegre, kwingingqi yeAlto Alentejo. Ngokwentsalela yezinto zakudala, esi sixeko ...
IZoo yeZilwanyana engaqhelekanga eLiberec
Nangona ePrague sinamakhulu eendawo zokuhlangana kwaye sonwabe, kukwanomdla ukuphuma apho ...
Ixesha lemvula laseJapan lihlala liphela phakathi kuJulayi, nakwiinyanga zasehlotyeni ...
Iindawo ezintle zasePhilippines ngendalo yazo
Olunye lweempawu eziphambili esiza kuzifumana kwilizwe elahlukileyo nelihlukeneyo njengePhilippines namhlanje ngaphandle kwamathandabuzo inento yokwenza nayo
Yazi eyona mithi mikhulu eCanada
Akunakwenzeka ukuba ungayeki eGrove Cathedral, eMacMillan Provincial Park, njengoko bekungumbandela ...
Indawo yokugcina izinto zeChaparrí
Lo mmandla unomdla. Ukungena kuyo kukunika imvakalelo yokuthakathwa, phakathi kwento engekhoyo kwaye, kwangaxeshanye ...
Ibhaluni yomoya oshushu ikhwela eMiami
Ukuhamba ngebhaluni yomoya oshushu ngokungathandabuzekiyo kuyonwabisa kwaye kuyindlela eyahlukileyo yokubona ubuhle bendawo entle ye ...
Bourton emanzini, iVenice yeeCotswolds
IBourton emanzini, edla ngokubizwa ngokuba yi "Venice of the Cotswolds", ithandwa kakhulu ngabakhenkethi.
Izizathu zokutyelela iCanada
Lilizwe lesibini ngobukhulu emhlabeni (yiRussian Federation kuphela enkulu), esolula…
Ukubhiyozela uSuku lweValentine eHolland
Qho ngonyaka kubhiyozelwa uSuku lweValentine ngoFebruwari 14 ngovuyo olukhulu kunye nomdla. EHolland,…
Enye yezinto ezinomtsalane kwisiqithi saseKey Biscayne yindawo yayo edumileyo yokukhanya, ebizwa ngokuba yiCape Florida Lighthouse, eyakhiwe e ...
Isishwankathelo semeko yeVenezuela
IVenezuela lilizwe elimi kufutshane neCaribbean kodwa linendawo eyahlukileyo okwa eVenezuela esinokuyifumana kwiintaba, ikhephu lokuziqhelanisa nemidlalo eyahlukeneyo enjengokuskiya okanye ukukhwela ikhephu kunye nolunye ulwandle oluhle olunonxweme loLwandle lweCaribbean, ngemithi yesundu kunye neenkonzo ezigqwesileyo zehotele, nangona kunjalo ingaphakathi laseVenezuela lisimema ukuba siziqhelanise nokhenketho lokuzonwabisa ngenxa yeempawu zalo ezintle kunye nokuba ungaya eholideyini.
Isitshixo iBiscayne, isiqithi esiyiparadesi saseMiami
Ngaphambi kwesango laseMiami, i-3 km kude, yindawo yeparadesi engenanto ...
Uyifumana phi ikhephu eJapan?
ISwitzerland, iSweden, iFinland, iHolland, iRashiya, iNorway… .. zezona ndawo zikhethwayo kwiiholide zasebusika eYurophu. Kodwa ukuba uthatha isigqibo ...
Imijelo yaseMilan, iNaviglio
Imbali yaseMilan idityaniswe ngokusondeleyo kwiinkqubo zemijelo
Ixesha lokubulala i-jellyfish e-Australia
NguDisemba kwaye ixesha le-jellyfish emantla e-Australia alikapheli kodwa bahlala bebonwa ...
Injani imozulu eIreland
Injani imozulu eIreland? Ewe, akukho mahluko mkhulu kubushushu phakathi kwamaxesha onyaka kunye nemvula.
Ummandla waseKinki wenziwe zii-7 zommandla (2 «Fu» kunye ne-5 «Ken»), emi kwindawo egubungela…
IiPrairies zaseCanada zenziwa njengommandla omkhulu owanda kuwo onke amaphondo aseCanada e ...
Ipaki yeSizwe iMuddus
IMuddus yipaki yesizwe emantla eSweden. Ime kwiphondo laseLapland, ngobukhulu bayo ...
Intlambo yeencopho ezilishumi
Intlambo ye-Peaks elishumi yintlambo e-Banff National Park enesithsaba ngeencopho ezilishumi ...
Ukhenketho lokuzonwabisa eCanada
ICanada, ngaphandle kwamathandabuzo, yintsimi egqwesileyo kukhenketho lokhenketho. Umzekelo, uya kufumana amanzi kuyo yonke indawo….
Imephu yee-coves eMenorca
Ii-cove zaseMenorca zidume kakhulu kwaye uninzi lwabakhenkethi luyathontelana ukuya kuzo. Akukho nto ingcono kunokuba nemephu ye ...
Ekwindla ka-1833, abasebenzi abathathu bokwakha abavela kwiCanada Pacific Railways babalekela ...
Ubomi bezilwanyana eSweden
Inani elikhulu lezilwanyana zasendle zihlala emahlathini nakwiintlango ezigubungela isibini kwisithathu seSweden. I…
Ngaphakathi kubume obahlukeneyo besi siqithi, imilambo yayo engenakubalwa ibonakala, ethi ibe ngumtsalane kubathandi be ...
Iintaba zeRocky: ICharmy yeCharmy yaseKhanada
Iintaba zeRocky zenza inkqubo yeentaba ezihamba ngokuhambelana nonxweme olusentshona kuMntla Melika, xa kuzalwa ...
IPaki yeZembali zeSan Felipe el Fuerte kunye neMyuziyam eYaracuy
IParque San Felipe El Fuerte, "iVenzuel Pompeii", eyichazwe nguMauro Paz Pumar, ibekwe kwindawo ...
Ukutyelela uluhlu lweentaba zaseMntla Melika
Enye yezona ndawo zintle zendalo eMntla Melika ziiNtaba zeRocky (okanye iiRockies), uluhlu lweentaba ...
IKurama yintaba ebekwe kwi-12 km ukusuka kwisixeko saseKyoto. Nguwo umkhwa wokuziqhelanisa noReiki, ...
Ilizwe lineentlobo ngeentlobo zeentlanzi kwaye ubuninzi bamanzi okuloba abalungileyo kubangele ...
Imeko yokusingqongileyo yaseCanada
ICanada ineentlobo ngeentlobo zezinto eziphilayo, ezihlala iintlobo ngeentlobo zezityalo nezilwanyana. Ubutyebi bathetha ngeentyatyambo kunye ...
Uluhlu lweentaba eSweden lubekwe kufutshane nomda waseNorway, eyaziwa njengeSkanderna. Uluhlu lweentaba luyaqhubeka ...
Amanzi ashushu ashushu eRoma.
Enye yezona ndawo zinomdla wokundwendwela eRoma ziindawo zayo zokufudumeza amanzi, ezifanayo nezi ...
Umzila weTulip: Haarlem ukuya eLeiden
Umhlaba weeTulips uhlala kwisiqwenga esingaphezulu kweekhilomitha ezingama-30. phakathi kukaHaarlem noLeiden. Yindawo ...
I-Piedra del Cocuy Isikhumbuzo seNdalo
Ime kwingingqi ye-Guiana Shield, kwicandelo elikumazantsi-ntshona eli lizwe, kufutshane nendawo yokudibana ...
Intwasahlobo isemoyeni! Kwaye akukho ndawo ingcono yokufumana utshintsho lwamaxesha kunaseNetherlands. NONE
Ukhenketho lwe-Gastronomic kumthendeleko weVirgen de la Candelaria
Amawaka abadanisi neemvumi balungiselela ukuthatha izitalato ngoqhwithela: Umthendeleko weNtombikazi enguMariya ...
Ukhenketho lwezigaba apho "iNyanga eNtsha" yafotwa khona
Kutshanje, uninzi lohambo oluya eCanada lwenziwe ngabalandeli besaga eqale ...
Ipaki yeSizwe yeBruce Peninsula
I-Bruce Peninsula National Park yipaki ebekwe kwiBruce Peninsula, e-Ontario, kumqolo wenyuka ...
Ipaki yeSizwe yeBruce Peninsula (II)
I-Bruce Peninsula e-Ontario yahlukile eCanada ngeentlobo ezahlukeneyo zeentyatyambo zasendle. Kungenxa yokuba,…
Imbali yaseburhulumenteni yaseGuárico
Igama lommandla waseGuárico wachongwa nge-Epreli 28, 1856, kwaye uvela kumlambo we ...
IMaturín ikomkhulu laseMonagas. Iqwalaselwa njengesixeko esineendlela ezininzi, iindawo eziluhlaza kunye nenkunzi yeoyile ...
Ubungozi beenyoka entlango
Iintlango zase-Egypt zezona ndawo zimangalisayo emhlabeni, kuba ukuba ucinga ngako, ...
Ipaki ye-Spa ye-Boca Toma, indawo yendalo kwi-Cojedes State
Le paki ikwiRicaurte Avenue, edlula esibhedlele, imizuzu nje emi-5 ukusuka kwidolophu yaseSan…
Ukuntywila kunye nokuLoba eMáncora
Enkosi ngokungqubana kwendawo ebandayo yaselwandle yeHumboldt kunye ne-El Niño eshushu (ye-Equatorial) yangoku, kwindawo ...
Iipaki zemixholo eMérida
Idolophu yase Los Aleros yabakhenkethi iLos Aleros ikuthatha iminyaka engama-60 emva kwexesha, kuhambo olupheleleyo lwezimanga kunye ...
Itempile yaseKotosh yeZandla eziPhambeneyo
Inxalenye yomlingo ejikeleze ukhenketho ePeru sisixa esimangalisayo sokufunyanwa kunye nokuhlala ...
IPico Turquino, eyona ntaba iphakamileyo eCuba
ICuba ayisosiqithi sineentaba ezinkulu kwaye eziphakamileyo kodwa inezayo kwaye phakathi kwayo inqaku ...
Iilwandle ezintle kakhulu eQuebec
Elwandle ubomi tastier itsho intetho kwaye kubonakala ngathi eQuebec eli lizwi ...
Iindawo zokhenketho zeTocache I
I-Tocache yiphondo lasePeruvia elibekwe kumazantsi endawo yoMlambo iHuallaga, emazantsi eSithili saseSan Martín….
UPico Bolívar, oyena uphakamileyo eVenenuela
Yeyona ncopho iphakamileyo eVenezuela, imi kwiinduli ze-Andes, kwi-Mérida State, ikhuselwe ...
Umlambo iSt. Lawrence
ICanada lelinye lawona mazwe makhulu ehlabathini; kodwa ezona ndawo ziyinyani zeparadesi zinje ...
Imvelaphi kunye nokubaluleka kwenkcubeko ye-Uros
"Imvelaphi yeUros, phakathi kokutshona kwelanga kunye nokusa kwesizwe saseUro" yintlanganiso leyo ...
NgoSeptemba 1, uSuku lweWattle Watt, intyatyambo yesizwe yase-Australia
I-wattle yegolide okanye i-acacia pycnantha yintyatyambo yesizwe yase-Australia, uhlobo olukhula ngokwendalo ...
ILos Llanos, umhlaba ongalawulekiyo: IBarinas
Ukuthatha iipesenti ezingama-21 zommandla wesizwe kwaye wanda ngokwamazwe aseCojedes, Portuguesa, Barinas, Apure naseGuárico, i ...
Imithi yesundu iMiami
Imithi yesundu ibiyiminyaka emininzi yenye yezona mpawu zibalulekileyo zedolophu yaseMiami, ukusukela ...
Amaxesha onyaka eIreland
Ukuba ungomnye wabahambi abangenangxaki ekukhetheni ixesha lonyaka apho ...
Eyona marsupial incinci emhlabeni, e-Australia
Kukho isiphumo esaziwa ngokuba "sisiphumo sikaLazaro" (kwindoda evuke ekufeni), exhaphakileyo ...
ISan Lorenzo Archipelago Ipaki yeSizwe yoLwandle
ISan Lorenzo Archipelago National Marine Park ikumanzi eSan Lorenzo archipelago ...
Indawo yokuLondolozwa kwendalo yeSizwe iWolong, ubukumkani beepandas
Indawo yokuLondolozwa kwendalo yeSizwe iWolong yindawo yokugcina ipanda ebekwe empuma yeNtaba iQionglai kunye ...
Ihlabathi leMiami Butterfly, eyona ndlu yamabhabhathane enkulu eMelika
EMiami siza kufumana imisebenzi engapheliyo yokwenza, uninzi lwayo ngokuqinisekileyo luya kuba lunomdla kuthi, ...
I-Wollemi pine, intsalela ephilayo yase-Australia
Ukuba ufuna amava wokuhamba phakathi kwezinto eziphilayo kunye nenxalenye yembali ekude, i-Australia ...
Kuya kufuneka ukutsala umdla wakho xa ubhabha ngaphezulu kwendawo yaseJapan, inani elikhulu lamahlathi akhoyo, ngakumbi xa ucinga ...